Madaxwayne Farmaajo, Sh. Shariif iyo Xasan Sheikh oo ka hadlay Doorashada Jabuuti | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanbaal hambalyo ah u diray madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jambuuti, ismaaciil Cumar Geelle, oo markale dib loo doortay.
” Waa guul xoojinaysa horumarka iyo xasilloonida gobolka, Waxaan ku kalsoonahay in aad dardargelin doonto horumarka iyo wax wada qabsiga dalalka gobolka”
Madaxweyne Ismaacil Cumar Geelle ayaa markii shanaad loo doortay xilka madaxtinimo ee Dalka Jabuuti, isagoo helay codad gaaraya boqolkiiba 98, sida lagu baahiyay warbaahintaJabuuti.
Sidoo kale Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh ayaa Hambalyo u diray Madaxwayne Geelle “ Waxaan u hambalyeynayaa walaalkey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo shacabkiisu mar kale u doorteen hoggaaminta Jibuuti. Waxaan u rajeynayaa in uu ku guuleysto ma’uuliyadda culus ee loo idmaday”.
Dhankiisa Sheikh Shariif Sh. Axmed Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya ayaa hambalyo u dirayaa Madaxweynaha dalka Jabuuti walaalkeen Ismail Omar Guelleh oo markii shanaad loo doortay inuu sii hogaamiyo dalka Jabuuti. “Waxaan leeyahay Allaha kula garab galo xilka culus ee shacbiga Jabuuti ay kuu doorteen, waxaana u rajeynayaa guud ahaan Jabuuti horumar iyo barwaaqo.” Ayuu yidhi Shariif.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=42180
12 Comments for “Madaxwayne Farmaajo, Sh. Shariif iyo Xasan Sheikh oo ka hadlay Doorashada Jabuuti”
Africa shit Continent..
Farmaajo dictator Geele u hambalyeeyey, dictatorkaas tuuga ah.
Kuye aqlabiyad 98% la i doortay..kkkkkkkkk
Dictator 98% waa u sharci…..yaab
Walaahi in sida Ismacill Cumar Gelle nina oran doonin Somalia 98% after 25 years anagiga la i doortay…..5 times*5years term….
Dadka kale ma rootiyaa🖕🏼
April 10, 2021 - 5:17 pm
April 10, 2021 – 10:45 am
April 10, 2021 - 5:55 pm
Geele,waxba ma oga.Demantia ayaa ku dhacday.
Xaaskiisa,Taliyaha Ciidan,ka Policeka iyo ka nabad sugida ayaa isdaba ordaya.Koox Mafia ah ayaa ka abuurmay wadankaasi.
Qooyska Geele,waxa ku jiraan Tijaarta aduunka.
Inta la hayo ilaa haataan,waa 80 Bilyan $$$$$.walina baadhitasnku wuu socdaa.
Laba wiil oo Habartu dhashay.Najib Cabdala Kaamil Canfarta ka soo jeeda iyo Libaan Ismaaciil Cumar Geele Mid ay u dhashay Geele ayaa isdaba ordaya.
Dadku may codaynin.
Isku soo wada duub oo Ismaaciil Geele.
Iyo Regimekiisa wadanka ku habsaday.
Ma sii joogayaaan 2 sano oo dambe.
Dadkiiba gaajo u dhinteen.
Kuwan Jaahiliinta ah ee ku hadaaqa,Formaajo waa Dictator,Xagay ku arkeen Dictator Huteelada laga soo caayo?
Xagay ku arkeen Dictator Boqolaal Xisbi loo samaysto,?
Dictatorka,doorasho uu rabo ayuu qabtaa.
Jaahiloow,Afkii u ku hadlayay Adeerkaagii Xalane lagu haystay,hala iman Golahs raga e;bal soo baro Dictatorka.
Dabadhilif wadaniga Dictator ku sheegaya.
April 10, 2021 - 6:44 pm
Wiil hoog ayaad tahay walle. Kaaga marag inaad nin culus oo wax garad ah tahay.
Inaga buufi cayayaanka baraha bulshada sxb
April 10, 2021 - 6:09 pm
War waaba kaa shakiyey ee ma waxaad
Dhageysataa TELEPHONE aan ku xanto
Xaladaan ayaan lahaa
Farmaajo wuxuu rabaa labo sano
oo Kororsi ah
Labadaas sano waxaa u suurtoobi
Inuu Mentor Abby Ahmed diraar noqdo
In Ciidamada hadda laga qaadey Gedo
In si fiican la isugu farasaaro Kismaayo
Aaqirka inuu KONTON KONTON KUN
OO UU UGU YEERAY CODKA ONE MAN ONE VOTE
uu ku qabsado CAASIMADAHA ILMO GAREEN
Kadibna uu dhaho DADKAA IDOORTEY EE
XAAN KU FALAA PARLIAMENT.
– Nabsi raageybaa nagu soo deg degay
Waase ku leeyahay
* Waxay nabareen waxay nabadeen
ayaa ka daran.
April 10, 2021 - 6:27 pm
Shariifba isaga oo 250 haysta oo soo qortay ayuu galay tartan kkkk
Wuxuu ka bilaabay,251,halka uu Maslax ka bilaabay,1 kkkkk
Hadii Diinta iyo dadnimada laga fogaado sida Somalida Somalida ayaa ceebta sharaf loo yaqaan,sharsftana ceeb loogu yeedhaa.
Idku soo wada duub.
Ha jiraan factors soo raacaa.
Laakiin wadankaasi kama badbaadayo Dabadhilif Daarood iyo Mooryaan Hawiye oo isbaystay.
April 10, 2021 - 6:55 pm
“Dabadhilif daarood iyo mooryaan Hawiye”.
War ninyow waxba noolamaad harin.
War dabadhilif daarood waa uun ninmankaa aad garanayso xabbada kor ha u ridine hoos u dhig Mr BaHaL.
@LOP KKK War dictatorship ha kufsan minfadlak.
Nin parlamaanka dhexdiisa seeri loo qaatay.
Nin maalin kastaa TV radio laga caayayo.
Nin shacab ah doorasho ku yimid ayaad ku sheegaysaa dictator.QABYAALAD.COM.
Waxaad u taqaan halyeey.
1-Nin San dulqaad lahayn oo MP xasaanad leh eryay
2-Waxaa ugu daran oo LOP iyo ku doodda federal system dunida golo degaan oo dadku soo doorteen oon shaqo ku lahayn amni in wareegto lagu kala diro waa ka zinaysiga iyo kufsiga nidaamka beenta ah ee federal aad ku sheegtaan.
Dib u raac habdhaqanka maamulka Puntland iyo Jubaland.
Bal fiiri Axmed madoobe from barasaab illaa meesha ugu hooseysa isagaa wada ah.
Hakuu ku yimid bal fiiri 3 iikeen dunida meel ay ka dhacdo ma lahan ma ninkaasaa lagu aamin karaa MP Jubaland?
WAR CAQLI QABIILKA KA WEYNAADA.
Hawiye intii laga cararaayay ayaad god nagu gurteen oo dalkan galigteen.
Bal fiiri dawaladda dhexe oo service bixisaa ayaad ku bedesheen jifooyin is waa haysta oo aan service lahayn oo un ayuuto oo kale ah.
Xalku waa in federal sax ah helaa,haddii kale STRONG CENTRAL GOVERNMENT waa in la helaa waxaa soo raaca 2000 tuulo oo wada madaxweynayaal ah dalkana San uma ahan
April 10, 2021 - 8:10 pm
Aniga Farmaajo waa dictator ma oran oo 4 sano dictator laguma noqdo.
Waxaan iri: Waxaan u jeedaa wadadii dictatorka oo cad inuu hayo.
4 sano gudaheed ayuu dikreeto dalka ku xukumaa, doorashada asaga ku soo baxayn in qabto diiday, ciidankii qaranka in asaga daacad u yihiin ka shaqeyey oo rag isku hubo u dhibtay taladooda.
Daanyeerta jaahiliinta mr. Bahal ku jiro oo Waqooyiga kasoo naq raacay yaan Koofur talo loogu dhiibin.
Wakaase Farmaajo 4 sano ugu dara…?
Hadda mucaaradka Amisom iyo ciidan u gaara ku waardiyeeyaan Xalane villa Somalia in dilo ka baqayaan hadday ugu tagaan.
Farmaajo isku qabiil ayaan nahay ee Somalia xor ah och democratic ah ayaa iiga muhiimsan xitaa hudduu walaalkay igu aabe iyo hooyo ah yahay.
Daanyeerta sida Dubbe ku jiraan oo Hargeysa, Boorama iyo Laascanood boob u socda in reer Koofur adoonsadan laga yeeli maayo.
Maalinbaa Affewerke, Musaveni iyo Ismacil Cumar Geele ahaayeen rag badbaadiye dal loo arkayey.. Maanta Aabow wax ahayn ma oran kartid adiga oo jooga Djiboiti, Asmara ama Kampala.
Ummada Somaliyeed Maxamed Siyaad from 1969 aabow ku hayeen…maxaa ku xigay…ileen doqoni waxa soo socda ma garato.
Maxaa aduunka dad xoolaha la aqli ah jooga.🖕🏼
April 10, 2021 - 8:19 pm
Wadadii aad taqaaney iyo aqligii Kacaanka lagu noqon maayo waayo Somalia geeljirtii millitariga ahaa aakhiro u direen, maantana in aqligaas boorka laga jafayo u jeednaa.
Mid ku seexo, taas dhiig ka xignaa haddii la diiday in xukunka si sharci iyo dastuur ah lagula kala wareego, 4tii sano mar.
Time will tell; meesha Somalia aado.🖐🇸🇴
April 11, 2021 - 2:10 am
Xanuun waxaa kugu dhacay awoowayaashaa cudur maxamuud lahaayeen afsoomaaliga baro cuqdadana waxaa kaa saari kara alaah subxaana watacaalaa laakiin ogoow reerkaagu waa fidno unool xitaa shiikh malihidin
April 11, 2021 - 2:55 pm
Waagii Majeerteen ka Cisman Maxamud u talinayey ayaa Cumar Maxamud diideen in boqorka gacanta ka dhunkadaan oo buuq ku kiciyeen, Waxay ugu geeri jireen, Cudur Maxamud, Cumar fitno..etc
Ragga Kacaankii Daanyeerka ahaa in xukunka ka tuuraan damcay 1978 Cirro iyo Cabdulaahi Yusuf hogaaminayeen waxay ahaayeen Cumar Maxamud, ragga Kacaankii xooga badnaa inta Hawdka galay awr usoo dhaansaday waxay ahaayeen rag Cumar Maxamud u badan.
Ragga Habargidir oo hubkii SNA gacanta u galay Galkacyo ka saari waayeen waa Cumar Maxamud..run
Hadana in Farmaajo gacanta ka dhunkadaan oo Aabow yiraadaan haka sugin.
Car tuulayda iigu imow🧐